भाडामा कपडा दिन थालेपछि पुरा भयो इन्जिनियर इशाको सपना ! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > भाडामा कपडा दिन थालेपछि पुरा भयो इन्जिनियर इशाको सपना !
admin December 27, 2020 December 28, 2020 जीवनशैली	0
नकुनै त’नाव, न कुनै कुराको झर्को जस्ले म्यासेज गरेपनि तुरुन्तै रिप्लाई गर्छिन् र आफ्नो कपडाको ब्रान्डको बारेमा चर्चा गर्न सुरु गर्छिन् । उनी हुन् २४ वर्षीय इशा खनाल । सेकेन्ड हेन्ड लेडिज गुप्र होस, या नारीहरुको सुख दुखको चौतारी माइतीघर भन्ने गुप्र कसैले लुगा चाहियो भनेर पोष्ट हा’लिसक्दा रिप्लाइ गर्न भ्याउने इशा मिजासिली स्वभावकी छिन् । न कसैको प्रश्नमा झर्को मान्छिन्, न त कसैले भनेको कुरालाई नराम्रो रुपमा नै लिन्छिन् मुसुक्क हास्दै आफ्ना सामानहरु देखाउँछिन् ।